Saadaasha 2009: Raadinta iyo Moobilku waa mustaqbalka | Martech Zone
Sabti, Noofembar 8, 2008 Isniin, Janaayo 14, 2013 Douglas Karr
Ka qaadashadeyda bandhigga ayaa ah in isticmaalka moobilku uu si joogto ah u helayo korsasho, taas oo siinaysa waddo cusub oo ay shirkaduhu ku gaadhaan macaamiishooda. Waa sababta aan rajo ugu qabo Isku-darka suuq-geynta mobilada ee boggagaaga iyo ololeyaasha shirkadaha sida 'Mobile-ka isku xidha'.
Intaa waxaa sii dheer, bogagga waxay bixiyaan caddayn fara badan oo ku saabsan koritaanka Suuqgeynta Raadinta (dabiici ah iyo lacag-bixin-guji) ayaa sii wadi doonta inay ku qarxaan koritaanka sababtoo ah natiijooyinka la qiyaasi karo iyo soo-celinta cajiibka ah ee maalgashiga. Waa sabab muhiim ah oo aan ugu dhaqaaqay booskeyga Compendium Blogware, a boosteejo shirkadeed oo bixisa arjiga iyo tababarka labadaba lagama maarmaanka u ah ganacsiyada si ay u helaan meelaynta raadinta dabiiciga ah.
Fagaaraha Pay Per Click, waxaan ku leeyahay laba saaxiibo - Pat East at Suuq gaynta Hanapin iyo Chris Bross oo ah Cudur daran - kuwaas oo si xawli ah u koraya isla markaana fulinaya ololeyaal istiraatiiji ah oo isku dhafan oo loo yaqaan 'PPC' kuwaas oo sii wadaya inay bixiyaan soo celin wanaagsan oo ku saabsan maalgashiga macaamiishooda.
Tags: raadinta lacagta lehbixisay wakaalada raadintaBixi halkii gujippcwakaalada ppc